Ku saabsan Aasraw Biochemical Technology Co.,
AASraw cusub ayaa aasaasay maalgelin muhiim ah, oo soo jiidatay tiro ka mid ah kiimikada tayada sare leh, intooda ugu badanna waxay xoogga saartaa warshadaha nukliyeerka. Iyadoo lagu guuleystey wareegtadii maalgalinta bilowga, waxaan maalgashannay qalabka tayada sare leh ee loogu talagalay qalabaynta, nadiifinta, iyo falanqaynta khadadka alaabta. Waxaan nahay sheyga dhejis ah, maaha oo kaliya iibiye alaabta shirkadda kale. Waxaan leenahay qalab dhamaystiran oo qalab, oo ay ka mid yihiin - Kaloorimetry-ga kaladuwan, baaritaanka dareeraha sare, wax-qabadka korriinshaha, ultraviolet-spectroscopy iwm. Hadda waxaan shaqaaleynaa in ka badan labaatan injineeriyaal farsamo. Hantidayada hantidu waa in ka badan soddon milyan oo doolar (US).
Ka dib markaan hirgelin "Xigmad, Iimaan, Adeeg," AASraw waxay bixisaa alaab qiimo leh, qiimo hoose, iyo karti buuxda si ay u caawiyaan nolosha adduunka oo dhan. Dhammaan alaabooyinka laga helo AASraw waxaa lagu bixiyaa nadiif ah oo aan ka yarayn 98%, dhammaantoodna waxaa si adag loo xakameynayaa ISO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP ama shahaadooyin kale sida looga baahan yahay inay ka soo baxaan heerarka loo baahan yahay ee dalalka soo dejiya.